| 'दलहरूबीच फाटो नल्याइकन निर्वाचन गर्छौँ '
मेचीकाली : 2017-02-16 18:44:16
सूचना तथा सञ्चार मन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले संसद्भित्र भएका संविधानप्रति प्रतिबद्ध राजनीतिक दलहरूबीच कुनै फाटो नपारी निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री कार्की दलहरूबीच चाँडै सहमति कायम हुने र निर्वाचनको वातावरण बन्नेमा आशावादी हुनुहुन्छ । नेकपा(माओवादी केन्द्र) पार्टी पङ्क्तिमाझ बौद्धिक व्यक्तित्वका रुपमा चिनिनु हुने उहाँसँग लिएको अन्तर्वार्ताका सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ:
निश्चित रुपमा, हामी संसद्भित्र भएका संविधानप्रति प्रतिबद्ध राजनीतिक दलहरूबीचमा कुनै फाटो नपारी, उनीहरूका राजनीतिक मतभेदलाई धेरै नच्यातिकनै सरकारले निर्वाचनमा जाने वातावरण बनाउँछ, चाँडै निर्वाचनको मिति घोषणा हुन्छ । प्रजातन्त्रलाई सुदृढ गर्ने यो अभियानमा हामी सफल हुन्छौँ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।
हामी एमाले समेतलाई लिएर मधेसमा चुनाव प्रचारमा जाने स्थिति बनाउन चाहन्छाँंै । मधेसमा चुनावको माहोल बनोस्, बन्द हडताल नहोस्, सबै मुख्य धारका दलहरू चुनावमा होमियून् भन्ने चाहन्छौँ । त्यसैले सरकार एउटालाई टाढा र अर्कोलाई नजिक बनाउने पक्षमा छैन । त्यसका लागि नै समय लागेको हो । अन्यथा क्षणभरमै निर्णय भइहाल्थ्यो नि !
यो सरकार बनेपछि ३६ को पोजिसन लिइरहेका दललाई ६३ मा ल्याइयो । नितान्त फरक राजनीतिक पोजिसन लिइरहेका पार्टीहरू एक ठाउँमा बस्ने वातावरण बनेको छ । अहिले राजनीतिक दलले लिइरहेको अडान निर्वाचनका लागि मात्र हो । यो नाराले बढी मत प्राप्त गर्ला भन्ने मनसुवा होला । हामीले विस्तारै आन्दोलनरत दललाई संसद्मा ल्यायाँैं जसले गर्दा अहिले आन्दोलनको अवस्था अन्त्य भएको छ । सबै दल प्रजातान्त्रिक बाटोमा आएका छन् ।
दलहरू बलियो भएका छैनन् । दलहरू बलियो भएपछि प्रजातन्त्र पनि बलियो हुन्छ । दलहरू बलिया भए त प्रजातन्त्र बलियो भइहाल्थ्यो नि ! अहिले संस्था बोल्दैनन्, व्यक्ति मात्र बोल्छन् । पार्टीको स्थिति हेर्नुहोस्, दलहरू बोल्न छोडेको कति भो कति ! पार्टीका नेताका मात्र आवाज सुनिन्छ । पार्टीको स्ट्यान्ड के भन्ने स्थिति देखा पर्दैन । यो दल बलियो भएको स्थिति होइन । तर दल र प्रजातन्त्र एक अर्काका पूरक हुन् ।
प्रजातन्त्र स्थूल व्यवस्था होइन । यो गतिशील प्रक्रिया हो । प्रजातन्त्र चलायमान हुन्छ । प्रजातन्त्र स्थूल चिजजस्तो आउने जाने गर्दैन । यसका दुईवटा आयाम छन् – एउटा राजनीतिक र अर्को सामाजिक । आवधिक निर्वाचन हुनु, प्रेस स्वतन्त्रता हुनु, दलहरू खोल्न पाउनु राजनीतिक आयाम हो भने पढ्ने उमेरमा स्कुलसम्म प्रवेश पाउनु, काम गर्ने उमेरकाले काम पाउनु, बाटो र बिजुलीमा पहुँच हुनु, स्वास्थ्य सुविधामा पहुँच हुनु सामाजिक आयाम हो । यसका लागि लामो सङ्घर्ष जारी रहन्छ । सात सालदेखि नेपालमा औपचारिक र सचेतरुपमा प्रजातन्त्रको मूलबाटो हिड्ने प्रयास भएको हो । त्यसकारण सात साल र फागुन ७ गतेको महत्व छ । यो दिनलाई सम्झिरहनुपर्छ । वर्तमान पिँढीलाई पनि सात सालले ल्याएको परिवर्तनबारे बुझाउन जरुरी छ ।
फागुन ७ गते जस्तै सहिद र प्रजातन्त्रका नाममा अरु दिन पनि विदा दिने गरिँदै आइएको छ । खासमा कुन दिनलाई महत्व दिन हो ?